HomeWararka CiyaarahaRangers oo Doonaysa inay jabiso rikoorka taariikhda abid ee finalka Europa League
Rangers ayaa isku dayi doonta in ay jabiso rikoorka abid ugu yaalay Europa League marka ayhabeenka arbacada finalka ku garaacdo Eintracht Frankfurt .
Markii ugu horeysay tan iyo 2008, Gers ayaa ku tartami doona final weyn oo Yurub ah, guul ay ku gaaraan Seville waxay u horseedi doontaa inay ku guuleystaan ​​​​koob koob qaarad ah marki labaad taariikhdooda, ka dib markii ay qaadeen koobkii ku guuleystay European Cup 1971-72 .
Ka dib markii ay ku dhameysteen kaalinta labaad ee Group A, Rangers ayaa tan iyo markaas ku riyaaqay waddo sixir ah oo ay ku gaareen finalka, oo ay ku jiraan guulo cajiib ah oo ay ka gaareen labada kooxood ee Jarmalka Borussia Dortmund iyo RB Leipzig, iyagoo ku garaacay labada lugood ee semi-finalka.
Haddii Gers-ku uu qaado koobka Europa League, waxa ay noqon doontaa kooxdii ugu horreysay taariikhda tartanka oo hal olole ka takhalusta saddex kooxood oo isku qaran ah.
Guusha kooxda Glaswegian-ka ayaa sidoo kale arki doonta Giovanni van Bronckhorst inuu noqdo tababarihii ugu horeeyay ee Dutch ah ee kor u qaada koobka UEFA Cup/Europa League tan iyo Dick Advocaat 2008, kaasoo ka adkaaday Rangers markii uu hogaaminayay Zenit St Petersburg.
Rangers ayaa u soo baxaysa bandhiga arbacada iyagoo ah kuwa yar yar iyagoo wajihi doona koox ka dhisan Frankfurt oo aan wax guuldaro ah la kulmin 12-kii kulan ee ugu dambeeyay ee tartanka Europa League ilaa finalka xilli ciyaareedkan.